Ciidanka Xoogga Dalka oo howlgal ku dilay horjooge Ajinabi ah kuna siifidaya deegaano hor leh. | Somali National Television - sntv.so
Home AMNIGA Ciidanka Xoogga Dalka oo howlgal ku dilay horjooge Ajinabi ah kuna siifidaya...
Ciidanka Xoogga Dalka oo howlgal ku dilay horjooge Ajinabi ah kuna siifidaya deegaano hor leh.
Muqdisho(SNTV)- Ka dib howlgalo qorsheysan oo ciidamada xoogga dalka ay ka fuliyeen degaanada jubboyinka waxa ay ku guuleesteen xureeynta buundada Araare ee G/Jubbada Hoose.
Buundada Araare ee G/Jubbada Hoose ayaa Nabadiidka Al-shabaab waxa ay halkaasi u eheed goob Nabadiidka Al-shabaab ay ku qaadaan lacagaha baada ah ee kooxdu ka qaado shacab isticmaalo buundada Araare.
Taliyaha ururka 58Aad ee guutada 11Aad ee ciidanka xoogga dalka G/dhaxe Cabdi ibraahim Cali oo la hadlay Idaacada ciidamada qalabka ayaa sheegay in galabta nabadiidka Al-shabaab laga xureeyay buundada Araare ee G/Jubbada Hoose oo u eheed goob ay ku qaadaan lacagaha baada ah.
G/dhaxe Cabdi ibraahim Cali waxa uu xaqiijhiyay in dagaalka nabadiidka Al-shabaab looga dilay 7 Maleyshiyaad ah isla markaasine ay ciidamadu ka furteen hubkii ay wadteen Maleyshiyaadkaasi .
Mudadii uu socday ayaa Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed howlgalo qorsheysan ku dilay Maleyshiyaad iyo horjooge sare oo ka mid ah Ajaanibta ka tirsan Nabadiidka Al-shabaab.
Horjoogaha la dilay ayaa heestay dhalashada wadanka Tanzania,isagoona ka mid ahaa horjoogayaasha ugu sareeya ee nabadiidka Al-shabaab u qaabilsan dhanka Jubboyinka.
Taliyaha ururka 58Aad ee guutada 11Aad ee ciidanka Xoogga dalka G/Dhaxe Cabdi ibraahim Cali ayaa Wakaaladda SONNA u sheegay in Howlgalka lagu dilay horjoogahaani uu ka dhacay Buundada Araare ee gobolka Jubbada Hoose.
Sidoo kale ciidamada Xoogga dalka ayaa nolosha ku qabatay labo dagaalame oo ka tirsan Al-shabaab oo lagu qabtay dagaalkii buundada Araare ee G/Jubbada Hoose.
Buundada Araare ayaa 7km u jirta degmada Jamaame ee G/Jubbada Hoose,waxayna ciidamada Xoogga dalka ay sidoo kale u ruqaansadeen degmada Jamaame oo xarun u ah nabadiidka Al-shabaab.
Maleeshiyada ALshababa ayaa soo wajahday cabsi iyo walwal xoogan,kuwaasi oo haatan qarka u saran in ay gebi ahaanba burburaan,kadib markii cadaadis xoogan ay kala kulmeen militariga Soomaaliya oo kaashanaya saaxiibada Soomaaliya.
Previous articleMadaxweynaha Farmaajo oo Hambalyo u diray Madaxweyne Rajab Dayib Erdogan
Next articleGuddoomiyaha Golaha Shacabka oo maanta u amba baxay Jabuuti
Tartamayaasha Degmada Kismaayo oo caawa u gudbay wareegga 4aad ee tartanka “SAWIRRO”
Madaxweyne Farmaajo oo kulan afuro ah la qaatay Culimada Soomaaliyeed “SAWIRRO”
Tartamayaasha Degmada Jilib oo caawa u gudbay wareegga 4aad ee tartanka “SAWIRRO”
Tartamayaasha Degmada Kismaayo oo caawa u gudbay wareegga 4aad ee tartanka...
Tartamayaasha Degmada Jilib oo caawa u gudbay wareegga 4aad ee tartanka...